के भन्दैछन् प्रधानमन्त्री संसदमा? (लाइभ) | Nagarik News - Nepal Republic Media
के भन्दैछन् प्रधानमन्त्री संसदमा? (लाइभ)
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अोलीले आसन्न भारत भ्रमण र अन्य विषय बारे प्रतिनिधि सभामा जानकारी दिइरहेका छन् । हेर्नुहाेस् लाइभ ।
प्रकाशित: २० चैत्र २०७४ १४:५० मंगलबार
भन्दैछन् प्रधानमन्त्री संसदमा लाइभ